DOWNLOAD mig-21 ara ngwugwu FS2004 - Rikoooo
Ngwugwu na-agụnye ọhụrụ mmetụta dị ka mgbe-burners, na-agụnye ọtụtụ nnụcha na-N'ihi dị ka nso n'ezie dị ka o kwere.
The Mikoyan-Gurevich mig-21 (Russian: Микоян и Гуревич МиГ-21; NATO akuko aha: Fishbed) bụ a supersonic ugboelu fighter ugbo elu, e mere site Mikoyan-Gurevich Design Bureau na Soviet Union. Ọ na-popularly utu aha "balalaika", si ugbo elu si planform-view oyiyi ahụ Russian akwara ngwá egwú ma ọ bụ ołówek (English: pensụl) site Polish ụgbọelu ruru udi nke ya fuselage.
Early nsụgharị na-ahụta nke abụọ-emana ugboelu alụso, mgbe e mesịrị nsụgharị na-ahụta ka na-atọ ndị ọgbọ ugboelu alụso. Ụfọdụ 50 mba n'elu anọ kọntinent bubatara ndị mig-21, na ọ ka na-eje ozi ọtụtụ mba a ọkara narị afọ mgbe ya nwa agbọghọ ụgbọ elu. The fighter mere ụgbọelu ndia. Ọ dịghị ihe ọzọ site aha, ọ bụ ihe kasị-emepụta supersonic ugboelu ugbo elu na ụgbọelu akụkọ ihe mere eme na ihe ndị kasị-emepụta ọgụ ugbo elu ebe ọ bụ na Agha Korea, o nwekwara ndị fọdụrụ n'ezinụlọ mmepụta ọsọ nke a ọgụ ugbo elu (1959 ka 1985 nile variants).
Onye edemede: Kazunori Ito & Spike